NAXARIIS DARO: Wargayska Evening News Oo Qiimayn Aan Naxariis Lahayn Ku Sameeyay Ciyaartoy Kasta Oo Man United Ah Iyo Xidigaha Ceebtu Ka Raacday. - GOOL24.NET
NAXARIIS DARO: Wargayska Evening News Oo Qiimayn Aan Naxariis Lahayn Ku Sameeyay Ciyaartoy Kasta Oo Man United Ah Iyo Xidigaha Ceebtu Ka Raacday.
November 23, 2018 Mahamoud Batalaale
Qiimayn lagu sameeyay ciyaartoyda Manchester United ayaa muujinaysa sida ayna xili ciyaareedkan ugu jirin xaaladii ay ka doonayeen jamaahiirta kooxdooda Red Devils waxayna qiimayntani ceebi ka raacday ciyaartoy badan oo uu Mourinho ka waayay qaab ciyaareedkii uu ka doonayay.
Wargayska Evening News ayaa isku qabtay isha naxariista waxayna qalinka iyo warqada u qaadeen in ay qiimeeyaan bandhigii ciyaartoy kasta oo Manchester United ah ee intii lagu soo jiray xili ciyaareedkan, waxayna soo saareen qiimayn la odhan karo waa midii ugu adkayd ee uu wargays sameeyo.
Iyada oo aan qiimayntan loo kala eegin ciyaartoy magac wayn leh iyo mid da’yar ah ayaa lagu saleeyay bandhigii ciyaartoyda ee waqtigii ay garoonka ku jireen iyada oo mid kastaba laga doonayay in uu helo qiimayn dhan 10/10 ama tobankiiba toban balse ciyaartoyda qaar ayaa helay 1/10 ama tobankiiba hal kaliya.
Haddaba Shabakada Gool24 ayaa halkan idiinku soo gudbinaysa qiimaynta adag ee uu wargayska Evening News ka sameeyay bandhigii ciyaartoy kasta oo Man United ah ee xili ciyaareedkan iyada oo waliba ay muujiyeen sida ay laba xidig lama filaan u noqdeen kuwa ugu fiican Red Devils.
Aan marka hore idin xusuusiyo xaalada natiijooyinkii Man United ee lagu saleeyay qiimayntan waxayna Man United soo guulaystay lix kulan oo ka mid ah 12 kii kulan ee ugu horeeyay Premier league taas oo la micno ah in ay soo guulaystay kala badh kulamadii ay Premier league ka soo ciyaartay.
Waxayna taasi keentay in Manchester United ay 12 dhibcood hoos uga dhacday hogaanka Premier league ee ay ku jirto kooxda ay sida wayn u xifiltamaan ee Manchester City waxaana loo arkaa in haddaba ay United quus ka taagan tahay ku guulaysiga koobka Premier league balse ay u tartamayso kaalmaha Champions League loogu soo baxo.
Waxa kale oo ay Man United soo guulaysatay laba kulan oo ka mid ah afartii kulan ee ay Champions league ka soo ciyaartay waana kala badh kulamadii ay tartamada Yurub ka soo ciyaartay halka labada kulan ee kale ay ka heshay barbaro iyo guuldaro soo gaadhay.
Laakiin Man United waxay haysataa fursad ay ku soo gaadhi karto wareega 16ka kooxood ee Champions League kadib markii ay soo laabasho cajiib ah ka soo gaadhay Juventus kulankii ugu danbeeyay waxayna labada kulan ee hadhay la ciyaari doontaa Valencia iyo Young Boys.
Haddaba Halkan hoose ee bogga 2-aad Qiimaynta Kaga Boggo.